2022 年5月 30 日	 2022 年6月 25 日
ပထမဆုံး ကာစီနို ဟာ ကစားသူတွေကို ပထမဆုံးအနေနဲ့တံခါးဖွင့်ပြီးကြိုဆိုခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း 400 နီးပါးလောက်ရှိပါပြီ။ အဲ့အချိန်ထဲကနေစပြီးတော့ အခုခေတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Casino ဆိုတဲ့ Concept က ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲမှုမရှိပေမယ့်လည်း အခုခေတ်မှာတော့ Online Casino ကစားနည်းတွေကိုပါ ကိုယ်တွေရဲ့နေအိမ်ထဲမှာပဲ ကစားလို့ရနေပါပြီ။ ဒါတွေအကုန်လုံးက ဘယ်ကအစပြုခဲ့တာလဲ? ပထမဆုံး ကာစီနို ကိုသွားခဲ့တဲ့ ကစားသူတွေကရော ဘယ်လိုကစားနည်းတွေ ကစားခဲ့ကြတာလဲ
‘Casino’ ဆိုတဲ့ Italian စကားလုံးရဲ့အရင်းအမြစ်က ‘casa’ ဆိုတဲ့ ‘အိမ်’ လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ စကားလုံးက ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကစားလုံးက ဖျော်ဖြေမှုအဆောက်အအုံနေရာတွေဖြစ်တဲ့ Country Villa (သို့) Social Club တို့ကိုခေါ်ဖို့အတွက် သုံးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လဲ ပထမဆုံး Casino က Italian မြေပေါ်မှာအရင်ဆုံးဖွင့်ခဲ့တာ သိပ်တော့ မဆန်းတော့ပါဘူး။
ပထမဆုံး Casino ကို Ca’ Vendramin Calergi လို့ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ Venice မှာရှိတဲ့ Grand Canal မှာတည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 1638 ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့ တဖြေးဖြေးနဲ့ International Gambling အတွက် hotspot တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒီအဆောက်အအုံက အစတုန်းကတော့ Teatro Saint Moses ဆိုတဲ့ပြဇာတ်ရုံ နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့ ပြဇာတ်ခဏနားတဲ့အချိန်တွေမှာ Gamble လုပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ Original “II Ridotto” လို့ခေါ်တဲ့ Gamble အခန်းကို Francesco Guardi နဲ့ Pietro Longhi တို့က ပန်းချီအနေနဲ့ပုံဖော်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ပထမဆုံးလဲဖြစ်၊ Permanent အခြေတကျနဲ့ Casino ဖွင့်ခဲ့တာဆိုတော့ ရေပန်းစားမှုကတော့ အတော်လေးမြင့်ခဲ့တာပေါ့။ ပထမဆုံး Casino စဖွင့်ပြီးတော့ ရာစုနှစ် တစ်ခုထဲမှာပဲ Venice မြို့တစ်ခုထဲမှာ Gambling Site ပေါင်း 100 ကျော်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
Original Casino ကတော့ 1774 ခုနှစ်မှာ ပိတ်ခဲ့ရပြီးတော့ Casino di Venezia ဆိုတဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ပြန်လှည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ Active ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။ Italian Architect Mauro Codussi က Design ဆွဲထားတဲ့ Renaissance-style နဲ့ပြန်ဖွင့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ Grand Canal မှာ အံ့အားသင့်စရာအကောင်းဆုံးလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ တစ်ချိန်တုံးက သီချင်းရေးဆရာ Richard Wagner
နေထိုင်အရာအရပ်လဲဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဗျ။ Mattia Bortoloni, Palma il Giovane နဲ့ Gian Battista Crosato တို့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ Original Artwork တွေကို ယနေ့အထိ ခင်းကျင်းပြသထားလျက်ရှိပါသေးတယ်။
Roulette Online ကစားနည်းနဲ့ရင်းနီးသူတွေအတွက်ကတော့ ဒီ Classic ကစားနည်းဟာ Casino စဖွင့်ဖွင့်ခြင်းကမပါဝင်ခဲ့ပဲနဲ့ နောက်ရာစုနှစ်တစ်ခုလောက်ကြာမှပါဝင်ခဲ့တာလို့ သိရရင် အံ့အားသင့်သွားမယ်ထင်တယ်။ Casino မှာပထမဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ကစားနည်းတွေကတော့ Biribi နဲ့ Basetta တို့ဖြစ်ပါတယ်။Biribi ဆိုတာကတော့ Lottery ပုံစံကစားနည်းဖြစ်ပြီးတော့ ကစားသူတွေက မတူညီတဲ့ Outcomes 70 ရှိတဲ့ထဲကို Betting တင်ရတာပါ။ ဒီ Outcome တွေကိုတော့ Dealer က အိတ်တစ်ခုထဲကနေ ကျပန်းနှိုက်ပေးတာပါ။ Basetta ကတော့ Blackjack, Poker, Gin Rummy တို့နဲ့ဆင်တူတဲ့ ကဒ်ကစားနည်းတစ်ခုပါ။ အနိုင်ရသူတွေက လောင်းကြေးရဲ့ အဆ 60 ပြန်ရခဲ့တာနော်! ဒီကစားနည်းကနောက်ပိုင်းမှာတော့ faro လို့ခေါ်တဲ့ ကစားနည်းနဲ့အစားထိုးလာပြီးတော့ USA ဘက်ကိုထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Baccarat နဲ့ Bingo ကစားနည်းတွေကလဲ Italy မှာ 15th, 16th ရာစုတွေအတွင်း Casino တွေမှာကစားခဲ့ကြပါတယ်။
II Ridotto က အားလုံးအတွက်ဖွင့်ပေးခဲ့ပေမယ့် Stake အရမ်းများတာရယ် အဆင့်မြင့်တဲ့ Dress Code တွေရယ်ကြောင့် လူချမ်းသာ Noble ပိုင်းတွေပဲ သူတို့ရဲ့ Service တွေကိုခံစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာကစားဖို့အတွက် ယောကျ်ားတွေဆိုရင် ၃ထောင့်ရှိတဲ့ ဦးထုပ်ကိုဆောင်းရပြီးတော့ သူတို့မျက်နှာကိုအနည်းငယ်ပဲမြင်ရအောင် အုပ်ထားရပါတယ်။ မိန်းမဆိုရင်လဲ မျက်နှာဖုံးတွေဝင်ဆင်ခဲ့ကြရတယ်။ နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီနေရာက Italian စွန့်စားသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Giacomo Casanova အတွက်ပုံမှန် လည်ပတ်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Casino ကနေပြီးတော့ အခုခေတ် Online Casino တွေအထိ ခရီးစဉ်ကိုပြန်ကြည့်ရင် ရာစုနှစ် ၄ ခုလောက်ကြာပြီးပြောင်းလဲမှုတွေ များစွာဖြစ်ခဲ့တာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ကစားနည်းပုံတွေအပြင်ကို ကစားသူတွေရဲ့ပုံစံတွေပါ အပါဝင်ပေါ့!
PreviousLucky7 Casino မိတ်ဆက်
Nextညဘက်ကစားရင် နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပိုများတယ် shan koe mee 777